Ngokwezindinganiso isiRashiya, kathi kwale mizi emibili elikhulu esifundeni Ural zitholakala engekude kakhulu omunye komunye. Umzila "Ekaterinburg-Chelyabinsk" unqobe nsuku zonke abagibeli abaningi eya eningizimu Urals. Thola Chelyabinsk kusukela dolobha yesifunda ngezindlela eziningana. Ake sizame ukuba sihlaziye kubo futhi ukhethe best. Futhi yabhekisela ngokwabo, yona le mizi abaluleke kakhulu emlandweni Russian.
Ubude umzila "Ekaterinburg-Chelyabinsk" kancane amakhilomitha engaphezu kwamakhulu amabili. Zombili lezi amadolobha abangu eyasungulwa ekuqaleni kwekhulu nesishiyagalombili esikhathini yentuthuko zemvelo ambiwa phansi we Urals esifundeni. Bakhandwa ezimiselwe ukuba babe isisekelo sokuthethelelwa zikhula zezimboni nokwandisa umbuso Russian. Okusheshayo kakhulu ukukhula komnotho kula madolobha zaba nenkathi yamaSoviet yomlando. kude labantu ngamunye wabo Udlule kwezigidi ezingu uphawu. Ngesisekelo umnotho Urals kukhona umkhakha esindayo, izimayini kanye imboni lehlanganisa tinhlelo. Yingakho phakathi nenkathi yamaSoviet kusukela "Ekaterinburg-Chelyabinsk" ukuhambisa wezimpahla notshwala enkulu ekuqhubeni amabhizinisi kwezezimboni izikhungo ngobukhulu yezimboni Urals. Okwamanje, basuke zixhunywe ingxenye obuphelele umgwaqo 227 amakhilomitha, eseduze federal onguthelawayeka M5 "Ural".
Yiqiniso, indlela elula ukuba banqobe indlela "Ekaterinburg-Chelyabinsk" beshayela imoto yakho siqu. Ngezinye ukugcinwa ijubane kanye ukungabikho isiminyaminya endleleni kuzothatha isikhathi esingaphezudlwana amahora amathathu. Fuel ukusetshenziswa on uhambo imoto imayelana 16 amalitha, okuyinto ikuvumela ukuba uhlale ngaphakathi lemali esingeqile ruble 500. Izinga kwamanzi umgwaqo wonke agudle "Ekaterinburg-Chelyabinsk" ngempela egculisayo. Movement wenziwa ezindaweni ezahlukene kuleli izindlela bi- futhi SSB. Ukuminyana ngokuvamile kwenzeka kuphela njengoba eya ekugcineni iphuzu umzila.
Ingxenye elikhulu traffic umgibeli ephakathi kwamadolobha amabili elikhulu Urals is uthuthwa amabhasi. izinkampani eziningana zokuthutha sokuyokhonza umzila "Ekaterinburg-Chelyabinsk". Flight isheduli lihleleke ngendlela yokuthi ibhasi lokuqala kakhulu kusukela esiteshini sebhasi "North" uthunyelwa ngesikhathi 6 ekuseni, kanti owokugcina uyoba ngo - at 8 ntambama. Lokhu kukuvumela ukuba uthole lapho sasilibangise khona ngesikhathi sasemini. Emini bebheke Chelyabinsk kusukela eYekaterinburg wathumela amabhasi mayelana 18. Inombolo yabo inyuka kuncike ukufunwa amathikithi, ngokuvamile phambi ngempelasonto kanye namaholide wokhelwa izindiza ezengeziwe. Ukuze kube lula abagibeli ihlelwe njengoba ukuthumela amabhasi Chelyabinsk nge ima yezitolo "dirigible". Imali kuyinto 519 ruble angu-50 kopecks. Iphuzu sekupheleni umzila ukuyeka "Isigodlo sika Ezemidlalo" waseChelyabinsk.
Umbuzo kangakanani kusukela Chelyabinsk eYekaterinburg amakhilomitha, akuyona kuqonde njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Iqiniso ukuthi ujantshi wesitimela ephakathi kwamadolobha ubabonisa cishe emgceni locondzile, futhi ngokuhambisana nemithetho-geometry, umgwaqo mfushane ukuthi Curves kanye i arc ohlangothini entshonalanga. Kusukela komunye umuzi komunye, kungenzeka ukufinyelela ngesitimela, kodwa ukuqaphela lokhu kukhetha kunzima ngempela okungcono. Futhi akusiyo kuphela ukungabi khona ngqo zokuxhumana umzila "Ekaterinburg-Chelyabinsk". Amathikithi zidayiswa kuphela ezitimeleni zokuthutha ohlangothini eningizimu. Inani has ngesivinini esiningi ukuthi lo jantshi lingaphansi kunalokhu enkundleni yokugijima imoto. Ngakho-ke, isikhathi lesine kakhulu idlula isikhathi sokuhamba (lapho ibhasi ne ezintathu ezincane). Futhi izindleko ithikithi isitimela amanani siphezulu esihamba emzileni efanayo ngebhasi.
izindlela ukuze uthole Chelyabinsk kusukela eYekaterinburg
Ukuze uthole ingxenye enkulu abagibeli ngesikhathi zokuthutha umphakathi isici kubaluleke ngaphezu izindleko zokuya lapho sasilibangise khona. Kodwa labo onesibindi ukuya Chelyabinsk kusukela eYekaterinburg emoyeni, kufanele alungele izindleko zezimali ngaphakathi ayizinkulungwane nanye. Ithikithi eshibhe Chelyabinsk kuwufanele ruble 10.781. Yiqiniso, ukuze leSouth Urals futhi kungenziwa esafinyelelwa itekisi. Isevisi efanayo inikezwa eYekaterinburg izinkampani zokuthutha eziningana. Xhumana nabo ngocingo. Izindleko zalolu hambo kuyahlukahluka ngaphakathi kwemikhawulo ebanzi kakhulu, kuye ngokuthi inani abagibeli. Kodwa uma izindleko uhambo akusho uhlukanise nanoma ubani, futhi osidinga ngokuphuthumayo ukuya khona, kufanele uzilungiselele izindleko in inani ruble 4500-5000. olufanele kakhulu inketho ezinjalo kulabo zithunyelwa Chelyabinsk sezindiza "indandatho", esemgwaqweni endleleni imoto ehamba phambili lapho kusukela eYekaterinburg.
Izinqaba oMdala Ukraine. Izinqaba Eziyizigodlo Ezimangalisayo Ukraine
Imithombo ku ngezipikili nomhlane konke kubo